‘आप्पा’का दुई तन्नेरीसँग एकछिन : नन-एक्टर कसरी बने एक्टर ?
By soniya on	 6th June 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
असार १३ गते रिलिज हुँदैछ दयाहाङ राई स्टारर ‘आप्पा’ । फिल्मले बाउ–छोराबीचको सम्बन्धको कथा भन्छ । आप्पासँग दुई नयाँ अनुहार पनि जोडिएका छन् । भारतको कालिम्पोङका दुई नेपाली भाषी तन्नेरी : सिद्धान्तराज तामाङ र एलोना काबो लेप्चा । यी दुई नन–एक्टर फिल्म ‘आप्पा’का दुई स्तम्भ हुन् । फिल्म प्रवद्र्धनका लागि उनीहरु अहिले काठमाण्डूमा छन् । मूभिमान्डुसँग उनीहरुसँगको संवाद :
तपाईंहरु दुबैजना नन–एक्टर हुनुहुन्छ । आप्पाको पात्रभित्र डुब्नका लागि आफूलाई कसरी भौतिक र मानसिकरुपमा रुपान्तरण गर्नुभयो ?
सिद्धान्त : मैले विद्यार्थीको रोल गरेको छु । म पनि स्टुडेन्टको उमेर पार गरेरै यहाँसम्म आएको हुँ । स्टुडेन्ट भाइबहिनीसँग बसेर, कुरा गरेर, उनीहरुको इच्छा बुझेर सिक्ने खोजेँ । मैले झन्डै ७ किलो तौल घटाएँ । यसपछि म स्टुडेन्टजस्तो देखिएँ । क्यारेक्टरमा डुब्नु भनेको नन–एक्टरलाई च्यालेन्जिङ कुरा हो ।
एलोना : स्टुडेन्ट लाइफ हामीले भोगिसकेका छौं । म गल्र्स स्कुलको विद्यार्थी छु फिल्ममा । क्यारेक्टरको स्टाइल पक्रिन मैले बहिनीहरुसँग धेरै टाइप बिताएँ । म पनि चबी चबी (मोटी) थिएँ, ६ किलो घटाएँ । वेइट घटाएपछि स्क्रिनमा ठूलो देख्छ । यसरी मेन्टल्ली र फिजिकल्ली आफूलाई तयारी पारेँ ।
कसरी फिल्मलाई लिएर कन्भिन्स्ड हुनुभयो ?
सिद्धान्तः जतिसक्दो रियल लाग्यो मलाई । सुन्दा र पढ्दा खेरी मलाई नगुमाऊँ भन्ने लाग्यो । मुख्य कुरा ‘आप्पा’ भन्ने शब्द आयो । वास्तविक जीवनमा पनि मेरो आप्पा हुनुहुन्न, उहाँ बितेको दुई वर्ष भयो । कथा सुन्दा निकै कनेक्ट लाग्यो । मलाई महसुस भयो । अनि मैले गर्छु भनेँ ।
एलोना : यसमा मेरो पात्र काब्या भन्ने केटी छ । स्क्रिप्ट पढेपछि मलाई फिल्मकी काब्या मै हो भन्ने लाग्यो । उसको लाइफस्टाइल, बोलीवचन, संगत सबै मै हुँ भन्ने महसुस भयो ।
फिल्मलाई कसरी दर्शकले रिलेट गर्लान् ?
सिद्धान्त : मलाई लाग्छ, दर्शकसँग फिल्मको रिलेट अवश्य हुन्छ । ‘साँझ’ भन्ने गीतमा हामी स्कुल स्टुडेन्टको रोलमा फिचर्ड छौं । सायद अडिएन्सलाई यो गीत हेरेपछि स्कुल जीवनको सम्झना आओस् न । ‘हावा सरर’मा असीको दशकको विगतसँग रिलेट गराउँछ जस्तो लाग्छ । यो इमोसनले दर्शकलाई रिलेट गराउनेछ । कमेडी, रोमान्सजस्ता इन्टरटेनमेन्ट भ्यालुज पनि छन् ।
पहिलो फिल्ममै नेपाली स्टारसँग काम गर्नुभएको छ । दयाहाङ राईसँग काम गर्दा के सिक्नुभयो ? उहाँ कस्तो लाग्यो ?
सिद्धान्त : एक्टरको रुपमा उहाँलाई म वाउ भन्छु । पर्सनल्ली उहाँ हम्बल मान्छे हुनुहुन्छ । नाइँ भन्ने हुनुहुन्न । सट् सकिएर अर्को क्यामेरा एंगल आउँदा पनि उहाँ क्यारेक्टरमै बस्नु हुन्थ्यो । म यो पनि सिक्न चाहन्छु । फिल्मभरि नै उहाँले क्यारेक्टर छोड्नभएन कट् हुँदा पनि । बिनम्रता र करुणा उहाँको मनपर्ने पक्ष हो ।
एलोना : नभेट्दासम्म उहाँप्रतिको एउटा हेराइ थियो । भेटेपछि दया दाई सिम्पल मान्छे लाग्यो । एकदमै नम्र । यही नम्रताले गर्दा उहाँ माथि गएको जस्तो लाग्यो । उहाँको पहिलो फिल्म कबड्डी हेरेकी थिएँ ।
नेपाली फिल्मको इको–सिस्टमबारे तपाईंलाई के जानकारी छ ?
सिद्धान्त : पहिले फिल्म हेर्दिनथेँ । लास्ट फिल्म हेरेको भनेको दर्पण छायाँ । भारततिर हलमा नेपाली फिल्म लाग्दैन । बीचदेखि इन्टरनेटले गर्दा नयाँ भाइब्स आयो । युटयुवमा कागबेनी हेरेँ । रियल लाग्यो फिल्म । हामी योङस्टरलाई पुरानो फिल्म हेर्दा बोर लागेको थियो । तर, कागबेनीपछि हामीलाई हेर्न मजा लाग्यो । दया दाईकै कबड्डी निकै मनपरेको फिल्म हो । योङस्टरको विचार नै चेन्ज गरिदिए यी फिल्मले ।
एलोना : हलिउड र बलिउडसँग प्रभावित हुनु राम्रो कुरा हो । सिक्नुपर्छ तर हाम्रो मौलिकता भुल्नु हुँदैन । नेपाली कल्चर निकै सुन्दर छ खुशि र रङको । नेपाली मूभि पहिले हेरिँन । कबड्डी हेरेपछि नजरिया चेन्ज भयो । होस्टेल र जेरी मूभि हेरेपछि खुशि भए । इन्स्पायर हुनुपर्छ तर मौलिकता बिर्सनुहुँदैन ।
फिल्मभित्र तपाईंको केमेस्ट्री निर्माण कसरी भयो ? अनुभव कस्तो रहयो ?
सिद्धान्त : वर्कसप दौराना हामीले निकै टाइम बिताउन थाल्यौं एकअर्कासँग । बानी व्योहोरा थाहा हुँदै गयो । फ्रेन्ड्ली नेचरले गर्दा पनि एकअर्काको बन्ड चाँडै भयो । वर्कसपदेखि नै कम्फर्टेबल पाराले भयो ।
एलोना : म एकदमै कम्फर्ट जोनमा बस्ने मान्छे हो । थोरै बोल्ने, रिजर्भ टाइपको । निर्देशकले पटक–पटक कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन भन्दै गाली गर्नुहुन्थ्यो । मास कम्युनिकेसन स्टुडेन्ट भएकाले मलाई कम्युनिकेसन गर्न सजिलो भयो । सिद्धार्थलाई भेटेँ, समय बितायौं । खाना पकायौं । कम्फर्ट भयौं । यसरी केमेस्ट्री बिल्डअप भयो ।